हिंसा, बलत्कार बढ्दै जानुमा कसलाई जिम्मेवारी ठान्ने ?
असोज १५, २०७५ | रसुवा
दिनानुदिन महिला हिंसा घटना बढ्दै जानुमा कसलाई जिम्मेवारी ठानी सरकार पुरुषत्व परिवार, समाज, संस्कार या कसलाई दोष दिने ?
सबै हिंसामूलक घट्ना आ–आफ्नै स्थानीय विभिन्न परिवेश र अवस्थाका कारण हुने गर्दछ । जसका लागि राष्ट्र पनि आफ्नो नीति नियम वा कार्यान्वयनमा कही कतै चुकेको हुनुपर्छ ।
राष्ट्रमा हिंसाको घट्ना बढ्दै जानुमा समाज पनि अछुतो रहन सक्दैन । नेतृत्व तहका सबै व्यक्तिले पनि गल्तीको भागिंदार हो भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ । परिवार पनि यस्ता प्रकारको भागिंदार हो भनेर स्वीकार गर्नु सक्नुपर्छ । परिवार पनि यस्ता प्रकारको हिंसाको भागिंदार हौ हामी सबै जिम्मेवार रहनुपर्ने बेला आएको छ ।
हामीले व्यक्तिलाई परिवारमा कसरी हुर्कायौं कस्तो शिक्षा प्रदान गर्यौ, त्यही नै पछि देखिने हो । हामीले सबै पुरुषलाई दोषी र सबै महिलालाई सज्जन देखिनु मुर्खता हो । हामीले सही र सत्य पहिल्याउनु जरुरी पर्दछन् । त्यसैले हरेक घरपरिवारमा यौनका विषयमा खुलेर कुरा गर्न जरुरी छ । संसारका लागि राम्रो गरे जस्तो गर्ने, तर भित्र कुण्ठा पारेर हिड्ने यही कुण्ठाले भोलि ठुलो विस्फोट गराउँछ । परिवार, समाज र राष्ट्रमा जसले सामान्य उदाहरण बलत्कार, हत्या हिंसालाई लिन सकिन्छ । जति व्यक्तिले कुण्ठालाई दबाउदै जान्छ, त्यत्ति व्यक्ति खतरनाक बन्दै जान्छ । त्यसैले हामीले के सिक्दै सिकाउदै छौ, यो विषयमा एकपल्ट सोच्न जरुरी छ ।
राष्ट्रले युवाका लागि कस्तो कार्यक्रम ल्याउँछ । बालबालिका प्रति कस्तो प्रकारका सुविधा प्रदान गरेको छ । यी र यस्ता विषय महत्वपूर्ण रहन्छ । समाजले कस्तो व्यवहार गर्न सिकाउँछ । कस्तो परिवेश प्रदान गर्छ । त्यसैगरी परिवारले कस्तो संस्कार प्रदान गरी कस्तो समाजका परिकल्पना गर्ने भन्ने महत्व राख्छ । विद्यालयमा बालबालिकालाई अन्य शिक्षा प्रदान गर्दै गर्दा यौन शिक्षा, नैतिक शिक्षा, अध्यात्मिक शिक्षा कसरी प्रदान गर्दै आइरहेका छ । यो महत्वपूर्ण रहन्छ । र यौन हिंसा नियन्त्रण गर्नको कसको कसरी महत्वपूर्ण रहन्छ ।